July 2013 | IT Sharing Network
Facebook အသုံးပြုနည်း သရုပ်ပြပုံများနှင့် တဆင့်ခြင်း လက်တွေ့ရှင်းပြထားသည်
Facebook အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို စာအုပ်ပါ သရုပ်ပြပုံများနှင့် တစ်ဆင့်ခြင်း မြန်မာလိုလက်တွေ့ရှင်းပြထားပါတယ်။ ယခုမှစသုံးနေသူများနှင့် ပိုသင့်တော်ပေမယ့် ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အချက်တွေပါဝင်လို့ ကျွမ်းကျင်အဆင့်များလည်း ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုက်ကတော့ 4.10Mb ရှိပြီး လေ့လာလိုသူများအတွက် Sharebeast , Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်။
Forget Chromebooks! Chrome OS Is Coming To Windows / IOS
Chromebook ဝယ်ချင်သူများအတွက်ပါ Chromebook အရမ်းဈေမကြီးဘူး ဆိုတာဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ ပိုက်ဆံအကုန်ကြခံ ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုတော့ပါဘူး ဘာကြောင့်မလိုသလဲဆိုတော့ Windows / IOS မှာလဲ Chromebook လိုသုံးလိုရပြီ ဒါကြောင့် ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးလိုပြောတာပါ။ အောက်မှာ လုပ်နည်းကြည်ပါ Chromebook လို Windows / ISO မှာသုံးလိုရအောင်။
Virus တွေနဲ့ အခြား System ပိုင်းချို့ယွင်းမှုကြောင့် Windows မတက်နိုင်သလို၊ တစ်ချို့ Multiboot အနေနဲ့ Computer တစ်လုံးထဲမှာ Windows တွေအများအပြားတင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း Error တက်ပြီး ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့မေးစရာရှိတာ စက်တလုံးထဲမှာ Windows တွေအများကြီးတင်လို့ရလားပေါ့၊ နောက်တစ်ခုက ဘာလို့တင်တာလည်းပေါ့။ အများကြီးတင်လို့ရလားဆိုတော့ ရတာပေါ့ 1 ခု၊2ခုတောင် မဟုတ်ဘူး4၊5ခုတင်လို့ရတယ်။4,5ဆိုတော့ တင်စရာ Windows တွေရောရှိလားဆိုရင် ရှိတာပေါ့ အခုလက်တစ်လောသုံးနေကြတဲ့ Windows တွေထဲကပဲ ပြောမယ်ဆိုရင်တောင် XP, Visctor,7နဲ့ Sever 2003, Server 2008 တွေပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ဘာလို့တင်တာလည်းပေါ့ အဲ့ဒီ့ကိစ္စပြောရင် ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးပေါ့ တစ်ချို့က လေ့လာချင်လို့တင်တာ၊ တစ်ချို့ကျတော့ တစ်ခြား ဘယ် Software က ဘယ် Windows နဲ့ဆို အဆင်မပြေဘူး၊ ဒီ Windows ကိုကြတော့ ဒါကြောင့်သုံးချင်တယ်ပေါ့။ နောက်တစ်မျိုးတွေ့ဖူးတာရှိသေးတယ် သားအဖနှစ်ယောက် တစ်အိမ်ထဲ Computer 1 လုံးကို2ယောက်သုံးတာ၊ သားက Windows7သုံးချင်တယ်၊ အဖေက Windows7နဲ့ ရင်းနှီးမှုမရှိတော့ XP ကိုပဲ သုံချင်တယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ အဲ့စက်မှာ XP ကော Windows7ရော တင်ပေးထားရတာပေါ့။ ကြုံလို့ ပြောလိုက်ရဦးမယ် အဲ့လို Windows တွေ အများအပြားတင်တဲ့အခါ Version နိမ့်တဲ့ Windows ကို အရင်တင်မှ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဥပမာ XP နဲ့7ဆို XP ကို အရင်တင်ရပါတယ်။ Windows တွေ စဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် XP, Sever 2003, Vista, Server 2008, Windwos7အဲ့လိုမျိုး အစဉ်လိုက်တင်ရမှာပေါ့။ အဲ့လိုမျိုး Multiple Windows တင်တဲ့အခါ ဥပမာ XP နဲ့ Windows7နှစ်ခုတင်ထားတယ် ဆိုပါစို့ XP Windows က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်လို့ Repair လုပ်မယ်ပေါ့ နဂိုက Wnindows2ခုတင်ထားလို့ Boot စတက်တဲ့အခါ နှစ်ခုထဲက တစ်ခုရွေးပေါ့ အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီး Windows တက်ခိုင်းတာကနေ အဲလို့ XP ကို Repair လုပ်တဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်တတ်တာက XP ပဲ တန်းတက်လာပြီး ရွေးလို့မရတာမျိုး၊ Windows7ကိုရွေးလို့ရရင်လည်း Restart ပြန်ပြန်ကျတာမျိုးပေါ့ အဲ့လိုမျိုးကျရင် Windows7ကို ပြန်ပြင်ပေးရတော့မယ်။ အခု Windows7Repair လုပ်နည်းကိုပြပါမယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.17 Build3Final ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman615.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.15 Build 17 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... IDM မှာမပါတဲ့ apk ကဲ့သို့သော အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox ကနေတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါ.... တစ်ချို့ RAR ဖိုင်တွေ Download ချပြီးကာမှဖြစ်ဖြစ် RAR ဖိုင်တွေကို Password ပေးထားပြီးမှ မေ့သွားတာဖြစ်ဖြစ် RAR ဖိုင်တွေမှာပေးထားတဲ့ Password တွေကို ပြန်ရှာပေးမယ့် Recover လုပ်ပေးမယ့် Accent RAR Password Recovery ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... စမ်းသုံးချင်တဲ့ သူများ Dwonload ယူနိုင်ပါတယ်...
AVG Internet Security 2014 build 4016 [x86 - x64] With Keys
i) AVG Acclerator
ii) AVG enhanced firewall
iii) Smart scanning and shield protection with web browser
iv) Keep Your inbox clear of spam
v) Anti-smapware and Malware protection
မင်္ဂလာပါ... ဦးအောင်လင်းရေးသားထားတဲ့ Windows7အသုံးပြုနည်း လက်စွဲ စာအုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ဖုန်းအတွက် မဟုတ်ပဲ ကွန်ပျူတာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အသုံးဝင်ကြမယ်လို့လဲထင်ပါတယ်။ window မှာ ပါပြီးသား Search Computer တာလိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ window မှာ နဂိုကပါလာတဲ့ Search Computer က ရှာရင် အရမ်းလေးပြီး ကြာလည်းကြာပါတယ် ခုဖော်ပြပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေးကတော့ တော်တော်လေးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တော့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပါပြီခင်ဗျာ။
Laptop ထဲက Data တွေကို wifi ကနေပြီး ဖုန်းပေါ်ကနေကြည့်ကြမယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့ wifi ကနေပြီး ကွန်ပျူတာထဲက data တွေကို ဖုန်းကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရမဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ video တွေ နဲ့ photo တွေကို ပါ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ acer က အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့ acercloud service ကို အသုံးပြုပြီး ကြည့်လို့ရရမဲ့နည်းလမ်းပါ။ ပြုလုပ်ပုံလေးကို မပြောခင် လိုမဲ့ data တွေကို အရင်းဆုံး ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
Phone နဲ့ Tablet တော်တော်များများကို Root လုပ်နိုင်မဲ့ V-root New Version
Android Phone နဲ့ Tablet တော်တော်များများကို Root လုပ်နိုင်မဲ့ V-root ဗားရှင်းအသစ်ကလေး ထွက်လို့ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...အသုံးပြုကြည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုနောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာတဲ့ Galaxy Mega ကို အမြစ်မနုတ်ခင် လိုမဲ့ Data လေးတွေကို အရင်ဆုံး ဒေါင်းထားကြပါခင်ဗျာ အားလုံးစုံမှ ရှေ့ဆက်ကြပါမယ်...:P